Faah Faahin: Darawal Mooto Bajaaj Oo Lagu Dilay Xaafad Ka Tirsan Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii Faah Faahin: Darawal Mooto Bajaaj Oo Lagu Dilay Xaafad Ka Tirsan Muqdisho
Faah Faahin: Darawal Mooto Bajaaj Oo Lagu Dilay Xaafad Ka Tirsan Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Askari ka tirsan Ciidanka dowladda Soomaaliya oo xalay Darawal Mooto Bajaaj ku dilay gudaha Degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir.
Dilkan ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay agagaarka Xeebta Liido ee Degmada Cabdicasiis, waxaana Askariga uu rasaas ku dhuftay Darawalka xili uu ku sugnaa halkaas.
Goobjoogyaal la hadlay Warkii Online ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay u sheegeen in dilkan uu ka dambeeyay kadib markii muran yar uu dhexmaray Askariga dowladda iyo Darawalka Mooto Bajaajta, iyadoo ugu dambeyna la toogtay Wiilka.
Intaasi kadib waxaa goobta ka baxsaday Askarigii falka fuliyay, isla markaana waxaa goobta gaaray Ciidamo Boolis ah oo xiligaas aaga ku sugnaa, iyagoon halkaas ka qaaday Meydka Darawalkio Mooto Bajaajta.
Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilalka loo geysto dhalinyarada ku Shaqeysata Mooto Bajaajta, kuwaasi oo ay geystaan Askarta ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Previous articleAxmed Madoobe oo ku dhawaaqay go’aan liddi ku ah Xidig iyo Seeraar
Next articleDhooba-Daareed Oo Isaga Baxay Magaalada Garoowe